I-9x15 Podcast: Iihedfoni kunye nokuphelelwa lixesha okuCwangcisiweyo | IPhone iindaba
Kule veki sineendwendwe kwi-podcast yethu. Eli liqela le-Dotts, abadali beentloko zeVantablack esizithandayo kwaye esithetha ngazo Oku kubhaliwe. Njengenkampani yaseSpain ethatha amanyathelo ayo okuqala kweli lizwe linzima lobuchwephesha kunye neefowuni zeBluetooth sinomdla kakhulu kumava akho nakwizicwangciso zakho zexesha elizayo. Sikwahlomla kwezinye iindaba ezinje ngokucekeka okucetywayo okunokubangelwa yiApple kwizixhobo zayo ezindala xa ibhetri ingasaziniki ngaphezulu. Awungekhe uphulukane noku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » IPodcast 9 × 15: Iihedfoni kunye nokuphelelwa lixesha okucwangcisiweyo
I-Apple iceba ukudibanisa usetyenziso lwe-iOS kunye neMacOS